२०७४ – क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता, अन्यमा नतिजा सामान्य (पुरा विवरण सहित हेर्नुहोस ) – पुरा पढ्नुहोस्……
२०७४ – क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता, अन्यमा नतिजा सामान्य (पुरा विवरण सहित हेर्नुहोस )
काठमाडौँ । नेपाली खेलकूद क्षेत्रका लागि २०७४ साल मिश्रित रह्यो । वर्ष २०७४ मा नेपाली खेलकूदले क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त ग¥यो भने अन्यमा मिश्रित नतिजा निकाल्यो । क्रिकेटमा नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाउनु नेपाली खेल इतिहासकै मुख्य उपलब्धि रह्यो भने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विवाद भने कायमै रह्यो । आइसिसीबाट क्यान हालसम्म प्रतिबन्धित छ । यद्यपि समस्या समाधानको प्रयास भने जारी रहेको निलम्वित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बताउनुहुन्छ । “चाँडै नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधान हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
क्यान विवादबीच नेपालले क्रिकेटमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । नेपालले आगामी चार वर्षसम्म थुप्रै अवसर पाउनेछ । यसै वर्ष नेपाल आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन दुईको विजेतासमेत बन्यो । युवा क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले इन्डियन प्रिमियर लिग(आइपिएल)मा आबद्ध हुने मौका पाए । उनी डिल्ली डेयरडेभिल्ससँग रु ३२ लाखमा आबद्ध भए । अहिले उक्त प्रतियोगिता भारतमा जारी छ । यसै वर्ष निजी क्षेत्रको प्रयासमा टि–२० घेरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेष्ट प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग सम्पन्न भए । यि दुवै प्रतियोगिताले नेपाली खेलाडीलाई केही हदसम्म व्यावसायिक बनायो ।
यस वर्ष नेपाली फूटबलमा धेरै विवाद र कमैमात्र प्रतियोगिता भए । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन सकेन । यही चैत १४ गतेलाई तोकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ । ‘कार्यसमितिको निर्वाचन रोकी पाऊँ’ भनी भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले एन्फालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यसमितिको निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकाले निर्वाचन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । एन्फा कार्यसमिति सदस्य रमेशराज रायमाझी निर्वाचन अन्योलमा रहेको बताउनुहुन्छ ।
यस वर्ष केही खेलाडी विदेशी फुटबल क्लबमा अनुबन्धित भए । माल्दिभ्सको क्लब टिसी स्पोर्टस्मा आबद्ध रहेर त्यहाँ लिग खेलेका राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतीय क्लब मिनेर्भा पञ्जावमा पनि संलग्न रहे । त्यस्तै स्ट्राइकर विमल घर्ती मगर आई लिगकै क्लब मोहन बगानमा आबद्ध भए । मिडफिल्डर जगजित श्रेष्ठ अस्ट्रेलियाको प्रेस्टन लायन्स फुटबल क्लबमा आबद्ध भएका छन् । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर रोहित चन्द इन्डोनेसियाली क्लब पर्सिजा जकार्तामा आबद्ध भए । नेपालले एशिया कप छनोटमा भने सहभागिता जनाए पनि खराब प्रदर्शन गर्दै समूहको अन्तिममा रह्यो ।
विसं २०७४ जेठ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भलिबल खेललाई नेपालको राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रिय खेल घोषणापछि अहिले सर्वत्र भलिबलको चर्चा छ । भलिबलमा पछिल्ला वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्दैआएको छ । राष्ट्रिय खेल घोषणापछि यसै वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न रु एक करोड २० लाखको सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार एफएनसिसिआई कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तीन चरणमा आयोजना गरिने नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्मा बताउनुहुन्छ ।
एक दशकसम्म एथ्लेटिक्समा सक्रिय केशरी चौधरी भविष्य नदेखेपछि दुबईतर्फ लागेकी छिन् । चौधरीजस्तो प्रतिभाशाली खेलाडी बाहिरिनु नेपालकै लागि दुर्भाग्य भएको एथ्लेटिक्स प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङ बताउनुहुन्छ । “केशरीजस्तो खेलाडी विदेश जानु भनेको नेपालको खेलकूदलाई घाटा हो,”उहाँले भन्नुभभो ।
“खेलाडी पलायन हुनुको मुख्य कारण नियमित रूपमा प्रतियोगिता नहुनु हो । फुटबलको कुरा गर्दा वर्षौंदेखि प्रतियोगिता नहुँदा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । पहिलाका खेलाडी देश सम्झेर जीवन बिताउँथे, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन”, राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान हरि खड्काले भन्नुभयो ।-डोननेपालबाट
Prevतपाइको आजको राशिफल :- नेपाली नयाँबर्ष २०७५ साल वैशाख ०१ तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल १४ तारिख
Nextगोरु काटेको आरोपमा प्रहरीद्वारा ४ जना पक्राउ
शिशिर भण्डारी र टिकटक हिट जुम्ल्याहा दिदी बहिनीहरुको घमासान होली । सबैले शेयर गरौं- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
स्थानीय भन्छन एक्कासी भिरमा ठोक्किएर ठुलो आवाज आयो अनि हेलिकोप्टरमा आगोको मुस्लो देखियो…
आज एकै दिन यसरी घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस